TWELVE | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KROVANH update
August 31, 2009 — mmweather
Storm Alert issued at 31 Aug, 2009 6:00 GMT
Tropical Storm KROVANH is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
probability for CAT 1 or above is 30% within 12 hours
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ၁၂း၃၀ နာရီ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KROVANH သတိပေးချက် ထုတ်ပြန် (TSR)
Iwaki (37.0 N, 140.8 E) probability for TS is 85% within 12 hours
Miyako (39.7 N, 141.9 E) probability for TS is 75% in about 24 hours
Sendai (38.3 N, 140.9 E) probability for TS is 70% within 12 hours
Tokyo (35.7 N, 139.8 E) probability for TS is 65% within 12 hours
Note that …………………..
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: KROVANH, TWELVE, weather. 1 Comment »
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KROVANH(TWELVE) သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် နံနက် ဝဝး၃ဝ နာရီ TSR သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်
Storm Alert issued at 30 Aug, 2009 18:00 GMT
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: KROVANH, TWELVE, weather. LeaveaComment »
August 28, 2009 — mmweather
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း TWELVE ဟာ အခု အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကို ရောက်ရှိလာပြီး ပိုမိုအင်အားကောင်းလာနိုင်ကာ အဆင့် ၁ အပူပိုင်းတိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ရာ website တွေမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ၁၂ ခုမြောက်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှ အခုလို အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Iwo ကျွန်းရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၁ဝ အကွာမှာဗဟိုပြုနေပြီး မြောက်ဘက်ကို တစ်နာရီ ၈ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေပါတယ်။ မုန်တိုင်းဗဟိုမှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ မိုင် ၇ဝ (70 knots) အထိဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားနေရာမှ အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်မှုပြောင်းလဲ ရွေ့လျားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ မုန်တိုင်းဗဟိုမှာ အခု အချိန် ဒီရေလှိုင်းအမြင့် ၁၂ ပေ ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အခုဦးတည်ချက်အတိုင်းရွေ့လျားမယ်ဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တောင်ပိုင်းကတစ်ဆင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေ (Morakot – ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ ဒေသများ) သို့ ဆက်လက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။
အခုအချိန်မှာ လာမဲ့ ၇၂ နာရီအတွက် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ဖြတ်ကျော်မဲ့ လမ်းကြောင်း အတိအကျကို ခန့်မှန်းနိုင်ဘို့ စောသေးကြောင်း၊ Tropical Storm Watch မှာတော့ အောက်ပါပုံအတိုင်းခန့်မှန်းထားကြောင်း ၊ အခု ဖေါ်ပြထားတဲ့ LINK မှ တစ်ဆင့် လေ့လာစောင့်ကြည့်နိုင်ကြောင်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Tropical Storm TWELVE is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Posted in Announcements, Education, Weather Alert, Weather News. Tags: TWELVE, weather. LeaveaComment »